Umphakathi ubhikishele ugesi namanzi kwaMaphumulo | News24
Umphakathi ubhikishele ugesi namanzi kwaMaphumulo
UMPHAKATHI waseDakadaka, ku-ward 7 kwaMaphumulo, uvale umgwaqo ngamatshe ngesikhathi ubhikisha ngoMgqibelo, ngomhlaka 5 kuNdasa (March).
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major Thulani Zwane uthe umphakathi ubukhononda ngoku ngabi nawo ugesi, amanzi kanye nezingqalasizinda.
Uthe: “Kuboshwe abasolwa abaneminyaka esuka ku-25 kuya ku-38 ngamacala okudala udlame emphakathini, kulindeleke ukuba bazo vela enkantolo yeMantshi ngoMsombuluko. Amaphoyisa awatholanga mbiko yabantu abalimalile futhi ayikho nembiko yokuthi kulinyazwe impahla,” kusho yena.
IMeya yakwaMaphumulo uNkk Happy Ngcobo uthe ngenxa yokubambeka akakwazanga ukuyo kwethula umphakathi kodwa abaholi bakwa masipala bakwazile ukunqanda isimo.
Uthe kuthathwe isinqumo sokuthi kuzomele kubekhona umhlangano womphakathi ozohanjelwa isifunda iLembe, esihlinzeka amanzi, umasipala wakwaMaphumulo kanye no-Eskom abahlinzeka ugesi ukuze kuzo khulunywa ngezimfuno zomphakathi.
Uqhube wathi ababhikishi aba banganalo udlame njengoba abaholi bakwa masipala bekwazile ukukhuluma nabo kwathathwa isinqumo esithathiwe.
Kubikwa ukuthi izakhamizi zaseDakadaka zivimbele i-Independent Electoral Commission ukuba iqhubeke nohlelo lwayo lokubhalisela ukuvota ngoMgqibelo kodwa uhlelo lokubhalisa lubuyele ohlelweni ngeSonto.